Gbasara Anyị | Shijiazhuang Ezi Chemicals Co., Ltd.
Shijiazhuang Ezi Chemicals Co., Ltd. e guzobere na 2001, isi ụlọ ọrụ ahụ bụ: Hexamethylphosphoric triamide, Formamide, N, N, N, N'-Tetramethylethylenediamine, Dichlorodiethylether, 4-Methylmorpholine, 3,5-Dimethylpiperdine, 1,2 -diaminobenzene, ABL, wdg, anyị na ngwaahịa na-exported na Europe, Southeast Asia, Korea, Japan, Taiwan na mba ndị ọzọ na mpaghara. Ngwaahịa na-ọtụtụ-eji ngwá electronic, na nkà mmụta ọgwụ, pesticides, ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ ọgwụ, e ji esiji ákwà, mmiri ọgwụgwọ, sịntetik ihe na ọtụtụ ndị ọzọ ubi.
Kemgbe ntọala ya, ụlọ ọrụ ahụ na-agbaso echiche echiche mmepe nke "iguzosi ike n'ezi ihe, nkwụsi ike, mmepe na nhazigharị", ma nọgide na-arụ ọrụ ogologo oge ma kwụsie ike ma ọ bụ na-ekere òkè na ụlọ ọrụ ụlọ dị ike na ụlọ ọrụ nyocha nke mpaghara iji hụ na ngwaahịa kwụsiri ike na ọnụahịa. uru, karịsịa Ọ bụ iji hụ na mmepe na mmepụta nke ngwaahịa ọhụrụ, ma ugbu a kpụrụ a ọkà mmụta sayensị ọkachamara chemical akụrụngwa ọkọnọ enterprise, ụlọ ọrụ na ahia ịlụ na anụ ụlọ na ndị mba ọzọ ahia.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, e nyegoro ụlọ ọrụ aha "Integrity Advanced Enterprise Brand" ma ọ bụ "-lọ Ọrụ Na-arụ Ọrụ nke Ọma" nke ọtụtụ mba ma ọ bụ mpaghara-ọkwa ma ọ bụ òtù dị iche iche nyere; ekwuputakwala ma kwado ya site n'aka Alibaba, Baidu, HC Network na ụlọ ọrụ netwọkụ ndị ọzọ; ọ kachasị Anata ajụjụ ọnụ na mgbasa ozi nke kọlụm "Brand Power" nke ụlọ ọrụ CCTV Securities Information Channel.
Ime ihe n'eziokwu bụ ntọala nke mmepe ụlọ ọrụ, na ihe ọhụrụ bụ ikike na-akpali maka mmepe ụlọ ọrụ. Anyị na-etinye iguzosi ike n'ezi ihe mgbe nile na mbu, ọ bụkwa nchụso anyị inye ndị ahịa ngwaahịa ndị na-eju afọ. Ekwenyere m na site na mgbalị anyị na-enweghị mgbagha, anyị ga-enwe ọganihu na-aga n'ihu, merie ntụkwasị obi nke ndị ahịa karịa, ma mee ka ụlọ ọrụ anyị na-eto eto ma zụlite.
Ma ọ bụrụ na ọ na-ere ahịa ma ọ bụ mgbe ọ gachara ahịa, anyị ga-enye gị ọrụ kachasị mma iji mee ka ị mara ma jiri ngwaahịa anyị ngwa ngwa.
- Shijiazhuang Ezi Chemicals Co., Ltd.